Fasalada 6-12 waxay u wareegayaan waxbarashada durugsan; Ardayda yaryana waxay ku sii jiri doonaan isku-dhafka | Updates
Fasalada 6-12 waxay u wareegayaan waxbarashada durugsan; Ardayda yaryana waxay ku sii jiri doonaan isku-dhafka
Qoysaska qaaliga ah ee Iskuulada Nawaaxiga Osseo:
Waxaan idiinku soo qorayaa inaan idinla socodsiiyo subaxan, in Guddiga Iskuulada ISD279 ansaxiyeen soo jeedintaydii ahayd in laga wareejiyo ardayda dugsiyada sare (6-12) habkii isku-dhafka loona wareejiyo waxbarasho dadban oo buuxda, laga bilaabo Isniinta Nov.9 Isbedelkan waxaa loo sameynayaa sababtoo ah heerka kiisaska fayraska ee aageena iyo County -ga oo kor ugu kacay sare loona baahday qaab waxbarasho oo xadidan. Marka la eego xuduudaha loo sameeyey qorshaha waxbarashada badbaadada ee Minnesota, kororka dhaqdhaqaaqa fayraska wuxuu degmadeena ka dhigayaa Iskuulada hoose isku-dhaf/Iskuulada sare Waxbarshada durugsan.
Tani maxay uga dhigantahay ardayda fasalada 6-12?
U wareegidda waxbarashada durugsan ee buuxda macnaheedu waa in ardayda fasalada 6-12 ee hadda ku jira habka isku-dhafka u wareegi doonaa waxbarasho durugsan 100% laga bilaabo Nov.9. Qaabkan uma jiri doono maalmo la tegayo iskuulka ardayda dugsiyada sare. Ha yeeshee, waxaan siin doonaa caawimo qof ah shaqsiyaadka loo arko inay qabaan baahi gaara.
Isbedelkani ma quseeyo ardayda Akadeemiyada waxbarashada Durugsan, kuwaasoo awelba ku jirey 100% waxbarasho durugsan.
Tani Maxay uga dhigan tahay ardayda Xanaanada, xanaanada ka-hor iyo iskuulada hoose?
Isbedelku ma saamayn doono ardayda ka yar fasalka 6aad. Iyadoo la raacayo qorshaha waxbarashada amaanka ee Minneota, waxay sii wadan doonaan qaabka isku-dhafka, tegitaan maalin-badhkeed, iyo waxbarasho durugsan oo maalin-badhkeed ah.
Ma saamayn doontaa ciyaaraha/hawlaha dugsiga sare?
Ilaa hadda, ciyaaraha iyo hawlaha kale ma saamayn doonto. Tilmaamo cusub oo aanu usbuucan ka helay Waaxda Waxbarashada Minnesota ayaa waxay u ogolaanayaan in iskuuladu samayn karaan waxbarasho durugsan oo buuxda siina wadan karaan ciyaarahii iyo hawlihii kale haddii hogaamiyeyaasha iskuuladu go’aamiyaan inayna jirin khatar fiditaanka xanuunka oo ka jirta hawlaha ciyaartayda dhexdooda. Sidaa darteed, hadda, waan sii wadi doonaa ciyaarihii iyo hawlihii kale ee dugsiga sare. Laakiin, haddaan aragno fitaan xoog leh oo ka jira barnaamijka dhexdiisa, waan hakin doonaa ugu yaraan laba usbuuc, iyadoo la raacayo tilmaamaha gobolka.
Sidee Ardayda dugsiga sare u helayaan barnaamijka cuntada?
Si la mida sidii aan ku siin jirney labadii usbuuc ee ugu horeeyey sanad-dugsiyeedka. Ardayda/qoysaska iskuulka sare waxay ka qaadan karaan cuntada meelihii loo qoondeeyey. Ardayda/qoysasku waxay heli doonaan macluumaad ku saabsan cunto qaybinta usbuuca dhow.
Halqabsiga sanadkan waa: Filo Isbedel
Waxaan rabaa inaan idiin xaqiijiyo inaan xidhiidh la leeyahay masuuliyiinta Waaxda Waxbarashada iyo Waaxda Caafimaadka Minnesota iyo waaxda caafimaadka daweynaha ee Hennepin usbuuc walba si aan u hubiyo inaan haysano xogta saxa iyo tilmaamihii ugu dambeeyey. Tilmaamihii usbuucan aan helay waxay noo ogolaanayaan inaan xooga saarno kiisaska iyo xogta agagaarkeena, xogta aan helaynaana cabsi bay leedahay.Higsigeenu maalin walba waa inaan yarayno fiditaanka fayraska, si aan u sii wadno taxaderkeena adag ee caafimaadka iyo amniga anagoo si dhowna ula soconayna kiisaska ardayda iyo shaqaalaha dhexdooda.
Waad caawin kartaa
Samee baadhitaan caafimaad oo maalinle ah intaadan ilmahaaga iskuulka ama ciyaaraha u dirin
Xiro weji dabool, raac kala fogaanshaha, iskana ilaali isu imaanshaha badan.
Caruurtaada guriga ku hayso hadday jiran yihiin.
Tayada fiidiyihii saaka aan soo daynay
Waan ognahay in tayada fiidiyihii aan saaka soo daynay aan la aqbali karin, si dhaqso ah baanuna wax uga qaban doonaa. Kulamadana si gaara ayaan u duubi doonaa si aan ugu soo dhejino You Tube; waxaad heli doontaan koobi si fiican loo soo jaray oo ku saabsan kulamada oo ku soo baxa YouTube channel ugu dambayn duhurka maanta (10/30).
Waad ku mahadsan tahay inaad garawsatay inaan samaynayno waxkasta oo aan samayn karno jawi markasta isbedelaya iyo amaro isbedelaya oo gobolka ka soo baxaya. Waxaan abuurnay sanadkan hab waxbarasho oo gebihaanba cusub iyadoo lagu jiro duruufo adag, waanuna kaaga mahadcelinaynaa fahamkaaga iyo caawintaada inta aan ku jirno habkan cusub.
Kala soco kooxdeena luqadda Somaliga Facebook-ga.